परिचय – manoranjansansar.com | A Entertainment News portal for all
तनावग्रस्त अवस्थामा म आफ्नो यो तथाकथित परिचय लेख्दै छु ।
(साँच्ची, परिचय भनेको के हो ? पसलेले उधारो नपत्याइदिएपछि हीनभावले नीलो भएको कुनै अनुहार ? अथवा, लोकसेवाको फारममा टाँस्नुपर्ने दुइटा कान प्रस्ट देखिने फोटो ? अथवा, फलानोको नाति, फलानोको छोरो भन्ने खालको तमसुके विवरण ? अथवा, सिडिओ कार्यालयले जारी गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र ? अथवा, बसमा यात्रा गर्दा देखाउने नक्कली विद्यार्थी आइडीकार्ड ? के हो परिचय भनेको ?)
श्रीमतीले ठ्याक्कै बाइस मिनेटअगाडि फोन गरेर भनेकी छिन्, ‘भरे आउँदा १ नम्बरवाला ल्याक्टोजिन दूध ल्याउनुहोला ।’ त्यसलाई चार सय पचास रुपैयाँ पर्छ । अहिले यतिखेर मेरो खल्तीमा ठ्याक्कै बहत्तर रुपैयाँ छ । पचास र बीसका एक–एक नोट र रु. दुईको एउटा पहेँलो डबल । म सापटी दिन समर्थ शुभचिन्तकहरूको अनुहार सम्झिन खोजिरहेको छु । र, सम्झिन नसकेर निराश भइरहेको छ । यद्यपि, म असाध्यै आशावादी मान्छे हुँ । यो मेरो परिचयको पहिलो बुँदा हो ।
परिचितहरूको सानो ‘सर्कल’ मा रमाउँछु म । यस सर्कलको निक्र्याैल छ– म घमण्डी मान्छे हुँ । कति त मलाई ‘कसैलाई मान्छे नगन्ने’ सम्म भन्छन् । यही लेखोटमार्फत म प्रस्ट पार्न चाहन्छु– मान्छे गन्दै हिँड्नलाई म जनगणनाको गणक होइन ।
चरित्रगत हिसाबले आफू खराब नभएको मेरो विश्लेषण छ । श्रम गर्छु । ढाँटेर–छलेर खान्नँ । कसैलाई धोका दिन्नँ । यौनचरित्र पनि मेरो असलै छ । यत्ति हो, कहिलेकाहीँ महिलासाथीहरूको सुडौल वक्षमा नजर हुत्याउँछु । तर, दिवंगत माताको कसम खाएर भन्छु– जीवनमा बलात्कार गर्नेछैन ।
दालभातका लागि पत्रकारिता पेशामा छु आजका मितिसम्म । आजका मितिसम्म किन भनेको भने यस्तो दुखिया र असुरक्षित पेशाबाट भोलि मुक्त हुने आशा गरेको छु । अघि नै भनेँ नि म आशावादी मान्छे हुँ ।
कविता पनि लेख्छु म । छपाउँछु पनि कहिलेकाहीँ (चिनजानका मित्रहरूले छाप्दिन्छन् कहिलेकाहीँ भन्नु अझ यथार्थपरक होला) । ‘भोकको क्षेत्रफल’ नाउँको मेरो कवितासंग्रह बजारमा पाइन सक्छ । नपाइन पनि सक्छ ।
जम्माजम्मी आफूबारे मलाई यति भन्नुछ– म ‘बेसिक रूपमा’ खराब मान्छे होइन ।
पुनश्चः सम्पादक महोदय, यस किताबमा छापिएको मेरो तथाकथित निबन्धको पारिश्रमिक कहिले आउँछ ? किन्तु, त्यसले म दारु खाऊँ या छोराका लागि दूध किनूँ, त्यसमा चासो राख्ने अधिकार भने तपाईंलाई कदापि छैन ।
(‘निर्बन्ध मोन्टाज’ भन्ने निबन्धसंग्रहमा आफ्नो परिचय दिँदै विनोदविक्रम केसी । संग्रहमा यसको सम्पादित अंश प्रकाशित छ ।)
सायद र होस्टेल पछिको पृथक अवधारणा